प्रक्रियाहरू, अनुमतिहरू र प्राधिकरण | Martech Zone
प्रक्रियाहरू, अनुमतिहरू र प्राधिकरण
सोमबार, मार्च 16, 2009 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
म वेब डिजाइन पत्रिका पढ्दै थिएँ (उत्कृष्ट म्यागजिन!) र अनहेरड सेक्सनमा थियो:
प्रोग्रामरहरूको कम्पनीले कोड उत्पादन गर्दछ। प्रबन्धकहरूको कम्पनीले बैठकहरू उत्पादन गर्दछ। ट्वीट ग्रेग Knauss, प्रोग्रामर बाट।
यसले मलाई स्टार्टअपको बारेमा सोच्न थाल्यो। एक स्टार्टअप विकसित को रूप मा, मलाई लाग्छ कि जहाज मा काम आउने धेरै प्रकारका छन्:
पहिले आउनुहोस् '। तिनीहरूले चीजहरू पाउँदछन्, परवाह नगरी।
त्यसपछि नेताहरु आउन। तिनीहरूले कर्ताहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न र कम्पनीलाई सही दिशामा धकेल्न मद्दत गर्छन्।
त्यसपछि प्रबन्धकहरू आउनुहोस्। ती प्रक्रियाहरू, अनुमतिहरू र प्राधिकरण instill।
चरण the विघटनकारी चरण हो। प्रक्रियाहरू, अनुमति र प्राधिकरणको लक्ष्य गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न को लागी हो। जे होस्, जब यसले एक बढ्दो कम्पनीको रचनात्मकता र पहलमा बाधा पुर्‍याउँछ, यसले यसलाई गाडिनेछ। मैले काम गरेको प्रत्येक सुरुमा यो देखेको छु।
एक र color्ग पुस्तक र एक लाई क्रेयन्स प्रदान गर्दै कलाकार र तिनीहरूलाई लाइनहरूमा रहन भन्दै यो निश्चित पक्का तरिका हो कि तपाईं अमूल्य कलाको एक टुक्रा प्राप्त गर्नुहुने छैन।
टैग: प्रचारित ट्विटर खातासंकल्पभिडियो सम्मेलन
प्रस्तुतीकरणहरू: सभा मार्न एउटा सजिलो तरीका
मार्क्स 16, 2009 मा 3: 31 PM
व्यवस्थापनको प्रमुख कार्य नियन्त्रण गर्नु होइन सक्षम गर्नु हो। जब संस्थाहरूले मानिसहरूको सिर्जना गर्ने क्षमतालाई अँगालेको सट्टा मानिसहरूले के गर्न सक्छन् भनेर सीमित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्छन्, तपाईलाई गम्भीर समस्याहरू हुन थाल्छ।
दुर्भाग्यवश, धेरै प्रबन्धकहरू मानसिकतामा फसेका छन् कि व्यवस्थापनले अरू कसैलाई कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिन आवश्यक छ। वास्तवमा, महान प्रबन्धकहरू मानिसहरू हुन् सडक अवरोधहरू हटाउनुहोस् काम गर्न ताकि संगठनका स्मार्ट व्यक्तिहरूले प्रणालीसँग लड्नुको सट्टा आफ्नो प्रतिभा प्रयोग गर्ने क्षमता होस्।
हामीले हाम्रो Superbowl विज्ञापन संस्करणको लागि गत महिना दमनकारी व्यवस्थापन अन्तर्गत कर्मचारीहरूलाई के हुन्छ कभर गर्यौं विधिविज्ञान ब्लग। पूरा कथा यहाँ हेर्नुहोस्:
मार्क्स 16, 2009 मा 7: 23 PM
आमेन, रोबी! धेरै प्रबन्धकहरूले विश्वास गर्छन् कि कर्मचारीहरूलाई 'सक्षम' गर्नु भन्दा कर्मचारीहरूलाई 'सुधार्नु' उनीहरूको काम हो। मसँग सधैं मानिसहरूले मलाई 'सजिलो मालिक' को रूपमा बिल गरेका छन्, तर मैले अवसर पाएको बेलामा सधैं कुनै पनि अपेक्षाहरू पार गरेको छु।